Ao Syria, mampiasa ny zavakanto ho toy ny fitaovam-piadiana ny mpanohana ny fitondrana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Septambra 2018 9:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Español, polski, Ελληνικά, Français, عربي, English
Vondrona mpanakanto nanova ny lozoka (tonelina) nolavahan'ny mpikomy ao akaikin'i Damaskosy ho lasa toerana fampirantiana zavakanto. Pikantsary avy amin'ny tatitra nataon'ny sehatra fampahalalam-baovao ao Kremlin RT. Loharanon-tsary: Youtube.
Nandatsaka ny firenena tao anaty ranomodin'ny fahafatesana sy ny faharavana ny fifandonana Syriana ary niteraka krizy mahaolombelona ny vokatr'izany, hany ka toa tsy takatry saina fa afaka nampifandraisina tamin'ny zavakanto ireny zava-nisy nampihorokoditra rehetra ireny .
Na dia izany aza, namoaka ny endrika ara-javakanton'ny ady ny lafin'ny ady – izay milaza zavatra mampihetsi-po indraindray – mba hampitana ny hafatra efa voaomana manokana ho amin'ny fampielezan-kevitra. Nampiasa ny endrika fanehoan-kevitra izay anjakan'ny ady sy ny fandraisana olona ho miaramila ny fitondrana miaramila. Hita miharihary izany amin'ny tantara an-tsehatra, zavakanto, lamaody, hira pop ary ny sehatra hafa. Ary tsy mbola nisy zavatra nibaribary kokoa noho izany na taiza na taiza raha tsy tao amin'ny faribolan'ny fitondrana Syriana.
Hatramin'ny andro niandohan'ny revolisiona, nanindrahindra sy nanandratra fanjakana miaramila ny fitondrana Syriana. Eo am-pidirana ny faritany amoron-dranon'i Lattakia, toerana nahaterahan'ny mpanao didy jadona Syriana, mitsena anao eo am-pahatongavana ny baoti-miaramila goavam-be feno voninkazo. Hita manerana ny faritra eo ambany fifehezan'ny governemanta ihany koa ny baoti-miaramila toy izany.
Maneho an-tsitrapo ny fanehoan-kevitra am-pitiavana ho an'ny tafika Syriana ny fampitam-baovaon'ny fitondrana Syriana, ahitana ireo olo-malaza sy ny olon-tsotra aseho amin'ny ‘fanorohana’ ilay baoti-miaramila mba hanehoana fanajana sy fankasitrahana.
Nitrandraka ireo faritra “efa vonona ” potika vokatry ny daroka baomba nataon'ny governemanta ka nandrava ny faritra iray manontolo ireo andian-tantara sy horonantsary Syriana ary nahafahan'izy ireo nitsitsy vola tamin'ny fandravahana izany. Voatsikera ho nanasongadina ny hetsiky ny fitondrana ny sarimihetsika toy ny ‘Rain of Homs‘ [Oramben'i Hom] izay notontosain'i Joud Said sy ny ‘the Revolution Man‘ [Lehilahin'ny Revolisiona] izay notontosain'i Najdat Anzour .
Betsaka no mihevitra fa misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fahatsiarovana mampalahelo ho an'ireo mponina izay namoy havan-tiana, rava trano na izy roa ireo fanotontosana sarimihetsika natao tao amin'ny faritra rava ireo, izay heverina fa handrehitra indray ny fihetseham-pon'ny firenena rotiky ny ady mahatsiravina. Tsapa indrindra izany satria mikasa ny hanamafy ny fitantaran'ny fitondrana ny zava-nitranga izay manome tsiny ireo mpikomy tamin'ny fandravana tanteraka ny tanandehibe ireo andian-tantara ireo.
Tamin'ny volana Oktobra 2017, niteraka adihevitra ilay mpomba ny fitondrana sady mpamorona lamaody Syriana, Manal Ajaj, rehefa nampiakanjo ny mpilatro tamin'ny fanamiana miaramila Syriana nandritra ny fampisehoana lamaody tao Beirota izay araka ny filazany fa mba ho “fankasitrahana ny tafika Syriana”.
Tamin'ny volana lasa teo, Bashar Assad sy ny vadiny Asma nitsidika ny lozoka [tonelina] ambanin'ny tany iray nohadian'ny mpikomy (izay nomen'ny fitondrana anarana hoe mpampihorohoro) taorian'ny namehezan'ny fitondrana Syriana ny faritra atsinanan'i Ghouta tamin'ny volana Aprily.
Namadika ny lozoka ho lasa toy ny “toerana fampirantiana zavakanto ” ny vondrona mpanakanto manohana an'i Assad, araka ny sampam-baovaom-panjakana Syriana.
Ho fanohanana ny sanganasan'ireo mpanakanto, nilaza i Bashar Assad hoe:
Kolontsain'ny mpampihorohoro ny fandringanana, ny haizina ary ny fahafatesana, raha kolontsaintsika manokana kosa ny fanorenana, ny fahazavana, ny fiainana ary ny zavakanto.
Ankoatra izany, lasa nalaza ny lahatsary iray mampiseho ny miaramila Syriana mandihy amin'ny feon-kiran'ny hira malaza ao amin'ny faritanin'i Idlib any avaratra andrefan'i Syria rehefa hiady amin'ny tafika mpanohitra izy.ireo. Nandefa ity lahatsary ity ny mpomba ny fitondrana ho fanehoana ny herin-tsain'ireo tafika Syriana mialoha ny ady handringanana ireo faritra lehibe farany tazonin'ny mpanohitra ka mety hitrangan'ny rà mandriaka hafa indray amin'ny ady Syriana.